“Wanni illaan seentee Seentee aagibeeysitee, Darbuu malee lamuu Hin toltu deebitee…..” – Welcome to bilisummaa
bilisummaa August 31, 2015	Leave a comment
Je’e barreesseeti ittiiniis nu sirbee,
Guyyaan geenyaan du’ee lubbuusaatiin darbe,
Hayyuun abbaa waloo Abdi Qopheen keenya,
Barsiisaan dhugaan an godhadhe fakkeenya.
Qaanqee fekkeenyumma isaatu naaf tahe,
Anuu sanyi isaatii isumattiin bahe,
Damee abbaa tokkoo irraahi magarre,
Abdii Haaji Jaamii irraahii as saarree,
Asara Abdusabuur tahuu keenya barre
An damee ‪#‎Usmaail_Abdii‬
Inni damee ‪#‎Yuusuf_Abdii‬…..
Yaada sammuutiiniis tanaaf taane qindii,
Ta inni naaf baase’irraan deeme daandii.
Oromoo tahuuniis hundeen keenya tokkoo,
Sanirraan daranuu gudeeda abbaa tokkoo,
Isaa dursee deemee aniis xurree isaarra dhufe,
Bakka inni itti dhaabee fuudhee itti fufee,
Kanaafiin anilleen isumatti bahee,
Akkuma isaattiin aniis dungoo tahee
Ifii koof gubachaa saba kootiif ifa,
Irraan deebi’u yoomuu ittumaan gulufa.
Abbaa walaloo danuu
Hayyuu beekumsa garbaa,
Beekaa sammuu qaroo
Barreessaa walaloo sirbaa,
Waloo jechuun walii lamaa
Tan isaa ammoo addaa,
Dhimma jiruuf jireenyaa
Kan gammachuuf gaddaa,
Haala hawaasummaa kan waliin jireenyaa,
Adeemsa daandii jiruu kan dhabaaf qabeenyaa,
Hunda hin hambifnee tuqee asooseeysee,
Welliftoota beekkamoo maraaf laate walaleeysee,
Baadiyyaa magaalaa haala hundahu barreeysee,
Sammuu qaroon ifee dukkana nuuf ibse.
Jechi isaa mi’aawaan
Gurraan seenee nama lixa laphee
Surrii keessatti dhinee
Kan namatti maxxanu akka haphee,
Meeqaan hima waa’eesaa
Himuus hin dhumtu irraa dhaaphe,
Rabbiin haa rahmatuuf
Hayyuufi barreessaa waloo Abdi Qophee.
Abdii Mohaammad Yuusuf
Oromticha hayyuu damee warra qaalluu,
Waan baayyee taraaree..
Nuu garsiise akka dhaloonni irraa dhaallu,
Aniis kanumaafiin karaa isaa qabadhee
Fakkeenyummaa isaa itti aggaammadhe,
Waan baayyee hojjatee himeetuu waan fixuu,
Mataan du’uus seenaan du’ee dachiin lixuu,
Hojii isaatu arraas mul’atee dhawwaaqaa,
Aniis kanumaafiin waan gaarii carraaqa.
Abdi qophee fuulli rabbii itti haa toluu,
Du’aan dhabne namuu du’a irraan ooluu,
Duuba hayyuu kana meeqaatu jaalata,
Eenyuu ‘like’ godhee eebba isaaf laata,
Rabbiin haa rahmatuuf ja’aati eebbisaa,
Caffee jannataa haa taatuf qabriin isaa.
By: ‪#‎Saphaloo‬/Abdulbasit K.
Previous Ibsa Ijjannoo Miseensota Kallacha Walabummaa Oromiyaa (KWO/OIF), Afrikaa Kibbaa
Next ”L O O K O O ”——KITAABA YEROO LAMMAFFAAF BAHEDHA!!!!